सहरी विकास राज्यमन्त्री रामवीर मानन्धरको सिनेमा हल जोगाउन ३८ परिवारको उठिबास ! - Himali Patrika
सहरी विकास राज्यमन्त्री रामवीर मानन्धरको सिनेमा हल जोगाउन ३८ परिवारको उठिबास !
हिमाली पत्रिका १ भाद्र २०७७, 2:46 am
काठमाडौं । सडक विस्तारका क्रममा बालाजु, बाइपासका श्याम मानन्धरको घर भत्किएको सात वर्ष भयो । अहिले बाइपास चोकको ट्याक्सी पार्किङ बनेको स्थानमा रहेको आफ्नो घर भत्किएको उनी बताउँछन् ।
उपत्यका विकास प्राधिकरणले पनि राज्यमन्त्री मानन्धरको चलचित्र भवन भएतर्फ सडक मिचिएको स्वीकार गरेको छ । प्राधिकरणको काठमाडौं जिल्ला आयुक्तको कार्यालयले तत्कालीन पुनरावेदन अदालत, पाटनमा पठाइएको लिखित जवाफमा सडकको पूर्वपश्चिम दुवैतर्फ अति क्रमण भएको उल्लेख छ ।